Hakone, टोक्यो बाट भ्रमण | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, टोकियो
को प्रतीकहरु मध्ये एक जापान यो माउन्ट फुजी हो तर यदि तपाईं एकदम अग्लो भवनमा हुनुहुन्न र आकाश साँच्चिकै स्पष्ट हुँदैन भने यो टोकियोबाट राम्रो देखिदैन। यसको मूल्यांकन गर्न, अन्य पहाडहरू, ज and्गल र सुन्दर तालहरू सहित, तपाईंले शहर छोड्नु पर्छ।
Hakone एक सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य हो र सिफारिश गरियो जब यो जापानको अनुभव गर्न आउँदछ। यो टोकियोको धेरै नजिक छ र यहाँ यातायात एकदम कुशल छ, यो सजिलो र छिटो छ। र तालिकामा! त्यसोभए हेरौं हामी हाकोनमा के गर्न र देख्न सक्छौं।
1 हाकोनेमा कसरी पुग्ने
3 Hakone मा के यात्रा गर्ने
हाकोनेमा कसरी पुग्ने
यदि तपाइँ एक पर्यटक हुनुहुन्छ र तपाइँ खरीद गर्नुभयो जापान रेल पास तपाईंको देशमा तपाईं JR लाइनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो हो, सार्वजनिक लाइनहरू। तर केहि बिन्दु मा तपाइँ एक निजी लाइन मा जानु पर्छ र फरक तिर्नु पर्छ। यो जापानमा सामान्य छ: जेआर धेरै लामो छ, कहिले काहिँ तपाईले निजी लाइनमा जानु पर्छ। भाग्यवस, सधैं हुँदैन।
JR को साथ तपाईं ओडवारा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईं या त निजी ट्रेन वा बस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं टोकियो वा Shinagawa स्टेशन बाट shinkansen द्वारा आधा घण्टामा पुग्नुहुनेछ। यो कोडामा ट्रेनहरू र केही हिकारी हुनै पर्छ त्यसैले तपाईं टिकट बुक गर्न आउँदा अफिसमा सोध्नुहोस् (ओड्वारामा सबै हिकारी रोकिदैन)। अर्को विकल्प भनेको टोकियोमा एक स्थानीय वा द्रुत ट्रेन लिनु हो, जेआर टोकैडो लाइन वा जेआर शोनान शिन्जुकु लाइन। सबै जेआरपी द्वारा कभर गरिएको छ।
नगरपालिका विस्तृत छ र धेरै पहाडी गाउँहरू छन्, केही तालको किनारमा वा उपत्यकामा अवस्थित छ। सम्पूर्ण क्षेत्र यो ट्रेनहरू, बसहरू, केबेलवेहरू, फनिकुलरहरू र डु boats्गाको राम्रो नेटवर्कले जोडेको छ। यो पनि फरक प्रदान गर्दछ पर्यटक पास विभिन्न मूल्यहरु संग। अर्थात्:
Fuji Hakone Pass: क्षेत्र मा यातायात कवर गर्दछ र पनि Fuji पाँच तालहरु को आसपास। यो तीन दिन हो र वैकल्पिक रूपमा टोकियो बाट यातायात समावेश छ। यसको लागत 5650 50० येन, लगभग $ .०।
Hakone नि: शुल्क पास: दुई वा तीन दिनमा क्षेत्रका सबै ओडाक्यू ट्रेनहरू, बसहरू, फनिकुलरहरू, केबलवेहरू र डु boats्गाहरूको असीमित प्रयोग समावेश छ। र साथै, वैकल्पिक रूपमा, टोकियोको राउन्ड ट्रिप यातायात। यसको लागत 4000००० येन, लगभग e० यूरो।
Hakone कामकुरा दर्रा: यो सब भन्दा महँगो पास हो र तीन दिनको ओड्याक्यू नेटवर्कमा ट्रेनहरूको असीमित प्रयोग, हाकोन भित्र र वरपर यातायात, र कामकुरामा पहुँच प्रदान गर्दछ। यसको लागत 6500 XNUMX०० येन।
Hakone टोकियोबाट १०० किलोमिटर भन्दा कममा छ र रमाइलो गर्न राम्रो ठाउँ तातो चिसोहरू, हेर्नुहोस् lagos र आशा छ कि फुजीसन। ओन्सेन रिसोर्टहरू लोकप्रिय छन् र उनीहरूलाई रमाइलो गर्ने राम्रो तरिका भनेको एक परम्परागत जापानी आवास, र्योकनमा सुत्नु हो। त्यहाँ सबै मुल्यहरु छन् र म तपाईलाई विश्वास दिलाउँछु कि यसको अनुभव मूल्यवान छ।
तब त्यहाँ उचित थर्मल शहरहरू छन् जस्तै यमोटो, ओडवाराको नजिक, सबैभन्दा प्रसिद्ध। पहाडहरूमा र्योकनहरू लुकेका छन्, उदाहरणका लागि, र अरू आશિ तालको किनारमा। यदि तपाईं एक र्योकानमा बस्दै हुनुहुन्न भने तपाईं अझै सार्वजनिकमा न्यानो स्प्रि bath स्नानको मजा लिन सक्नुहुन्छ, यात्रुहरूका लागि खुला, 500०० र २००० येन बीचमा। यी ryokan का नामहरू लेख्नुहोस्: तेन्जान, हाकोने कामोन, युनोसाटो ओकाडा, हाकोन युरियो वा कप्पा तेg्गोकु।
Hakone मा के यात्रा गर्ने
जापान एक ज्वालामुखी देश हो जसको भूगोल यसको घटनात्मक ईतिहासले चिह्नित गरेको छ। Hakone यस हेर्न धेरै छ तपाईं गर्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र सबै हेर्नुहोस् वा आफूलाई सानो सर्किटमा सीमित गर्नुहोस्। यो तपाई के गर्न चाहानुहुन्छ र तपाईसँग भएको समयमा निर्भर गर्दछ।
यसका लागी छोटो सर्किट ओडवारा वा हाकोन-यमोटोमा ट्रेनबाट तल ओर्नुहोस् र टोजान ट्रेनमा जानुहोस् जुन minutes० मिनेटको यात्रा पछि गोरामा समाप्त हुन्छ। यहाँ तपाईं अन्तिम स्टेशनमा फ्युनिकुलर लिनुहोस्, केबलवेमा परिवर्तन गर्नुहोस् र आशिनोको तालको किनारमा पुग्नुहुनेछ। तपाईं डु by्गामा ताललाई पार गर्न सक्नुहुनेछ र हाकोने-माची वा मोटो-हाकोणबाट तपाईं बसमा लिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो सुरूवात बिन्दुमा फर्कन सक्नुहुनेछ। यो सर्किट यो तीन घण्टा भन्दा लामो छैन।
र लामो र पूर्ण सर्किट? तपाईं ओडवारा वा हाकोन-यूमोटोमा ट्रेनबाट ओर्लनुभयो। यदि तपाईं पहिलो स्टेशनमा जानुहुन्छ भने तपाईं ओडवारा कासल देख्न सक्नुहुन्छ जुन केवल १० मिनेट टाढा र पहाडमा छ। यदि तपाइँ एक लिनुहुन्न पुरानो ट्रेन, तोजान, Hakone-Yumoto स्टेशन, एक सानो तर सुन्दर शहर। त्यहाँ अंग्रेजी बोल्ने स्टाफहरूको साथ टुरिस्ट अफिस छ जसले तपाईंलाई नक्सा र तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुने ब्रोशरहरू दिनेछ।
स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ थर्मल स्नान घरहरू छन् र तपाईं एक दिन रहन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं रेलमा फिर्ता नहुनु भयो किनभने पछाडि हिंड्ने मार्ग सुन्दर छ, पहाड माथि। तपाईं प्राप्त मियानोशिता स्टेशनधेरै onsen संग। यहाँ १ th औं शताब्दीको पुरानो होटेल छ, जहाँ तपाईं पिउन वा केही खान सक्नुहुन्छ। दुई स्टेशन पछि, भित्र Chokokuno- मोरी, तपाईंसँग Hakone को सब भन्दा सुन्दर परिदृश्य छ र आधुनिक मूर्तिकलालाई समर्पित Hakone खुला एयर संग्रहालय।
यदि तपाईं दस मिनेट हिंड्नुभयो भने तपाईं पुग्नुहुनेछ गोरा, तोजान थर्मल वसन्त। यहाँ तपाईं फनिकुलरमा पुग्नुहुन्छ जुन पर्वतको चढाई हुन्छ। प्रत्येक स्टपको आफ्नै हुन्छ तर यात्रा अन्त हुन्छ सौजन तपाईं कहाँ लिनुहुन्छ Hakone केबलवे त्यो तपाईंलाई पाँच किलोमिटरको यात्रामा सिधा अग्लो ठाउँमा जान्छ। आधा बाटो तपाईंसँग छ ओवाकुदानी, एउटा क्रेटरको वरपरको क्षेत्र जुन तीन हजार वर्ष पहिले विस्फोट भयो र त्यो आज गन्धक फ्यूमरोल, थर्मल पोखरी र तातो पानीका नदीहरूको संरक्षण गर्दछ। र राम्रो मौसममा तपाईले माउन्ट फुजी पनि देख्न सक्नुहुन्छ।
यो यहाँ छ जहाँ तपाईं ज्वालामुखीको पानीमा सिधा पकाएको अण्डा किन्न सक्नुहुन्छ र ती धेरै कालो छन्। के तपाईंले यसलाई टिभीमा देख्नुभयो? त्यहाँ रेस्टुरेन्ट र पसलहरू छन्। यदि तपाईं अधिक साहसी हुनुहुन्छ र आरामदायक जुत्ता लिएर आउनुभयो भने तपाईं हिंड्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ र माउन्ट कामियामा र माउन्ट कोमागाटाकको शीर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाइँ फेरि फ्यानुकुलर लिनुहोस् र तल आशिनोको तालमा जानुहुन्छ। दुई घण्टा वायुको साथ हिँड्नुहोस् र कहिले काँही बर्षाको अनुमति दिनुहोस्।
यदि तपाईं यति धेरै हिंड्न चाहानु हुन्न भने, तपाईंसँग एक मध्यवर्ती मार्ग छ: तपाईं कामियमामा माध्यामा आधा घण्टा हिंड्नुहुन्छ र त्यसपछि अश्विनको तालको किनारमा जानुहुन्छ। टाढा टाढा हाकोन फनिकुलर हो जुन ओवाकुदनीसँग जोड्दछ। पाँच घण्टाको लागि अनुमति दिनुहोस्। ओवाकुदनी हकोन फनिकुलरको स्टेशनहरू मध्ये एक हो जुन सउजानलाई टोएन्डडाईसँग जोड्दछ।
तपाईं पनि सक्नुहुन्छ अशिनोको तालमा डुating्गा चढाइरहेको छ, Caldera ताल जुन क्लासिक फुजीसन पोस्टकार्डको अंश हो। त्यहाँ यसको किनारमा गाउँहरू छन्, केहि धेरै विकसित भएको छैन, र केही रिसोर्टहरू। त्यहाँ दुई कम्पनीहरू छन् जसमा समुद्री यात्रा छ र टूर आधा घण्टा भन्दा बढि रहन्छ र करीव १००० येनको लागत आउँछ। यहाँसम्म कि एक जहाज समुद्री डाकू हो र अर्को मिसिसिपी तरंग स्टीमबोट। सत्य यो हो कि समयको साथ लामो सर्किट अधिक सिफारिश गरिन्छ किनभने तपाईं लगभग सबै देख्नुहुनेछ जुन हकोने तपाईंको लागि छ।
यसको लागि, मेरो सल्लाह यो हो कि तपाइँ यसलाई दुई वा तीन दिनको भ्रमणको जस्तै लिनुहुन्छ। तपाईं क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, तपाईं हिड्नुहुन्छ, तपाईं आराम गर्नुहुन्छ, तपाईं रातमा बाहिर जानुहुन्छ र त्यसपछि तपाईं टोकियो फर्कनुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » टोकियो » Hakone, टोक्यो बाट भ्रमण